Maxaa dhacaya markaad lacag u isticmaasho soo jiidashada haweenka? - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Maxaa dhacaya markaad lacag u isticmaasho soo jiidashada haweenka?
Waxaa jira rag lacagtooda u isticmaala soo jiidashada haweenka. Si,kastaba, haweeneyda waxay kuu arkeysaa nin daciif ah haddii aad u isticmaasho lacag si aad u hanato qalbigeeda.
Waa inaad barataa habab kale oo aad kusoo jiidan karto haweenka intaad u isticmaali lahayd dhaqaalahaaga.
Maxaa dhaca markaad isticmaashid lacag si aad haweenka ugu soo jiidatid?
1. — Nin kasta wuxuu rabaa inuu helo ama soo jiito haweeney wanaagsan. Isticmaalka lacagta way kugu adkeyneysaa inaad hesho gabar kugu habboon oo noloshaada farxad u keeneysa.
iska ilaali inaad lacag ka hadasho markaad isku dayeysid inaad hesho gabar wanaagsan.
2. — Daacadnimada dhaqaale laguma iibsan karo. Ragga qaar kamid ah ayaa isku daya inay lacag ku hantaan qalbiga haweenka.
Mid kamid ah qaladaadka ugu xun ee aad sameyneyso ayaa ah inaad isku daydo inaad lacag siiso haweenka si aad u hanato qalbigeeda.
Dareen ahaan kuma kasbaneysid haweeneyda hadeey meesha taal lacag. Dabeecad wanaag, naxariis iyo kalsooni ayaad kusoo jiidan kartaa.
3. — Marka gabar aad kusoo jiidato dhaqaale ama ay kugu soo raacdo dhaqaale dartiis jacaylkaas waa maanta iyo berri iyo intaad lacagta heysato.
Waxaa loo baahanyahay inaad ogaato in gabartaas aysan kugu soo raacin jacayl dhaba iyo rabitaan isla markaana aad kusoo wadatay awoodda lacagta oo danta ay leedahay uu yahay dhaqaale.
Lacagtu way dhamaaneysaa balse waxaad ogaataa in gabadhaas ay kaaga dhaqaaqeyso halka ay lacagta kaaga go,do ama maalintaad shiid noqoto ay kaa tageyso, sidaa darteed iska ilaali inaad haween lacag kusoo jiidato.
Siyaabaha Lagu Xakameeyo Walaaca Lasoo Gudboonaada Lamaanayaasha
What no one tells you about sleeping with your ex
QUOTES EVERY SINGLE WOMAN WHO NEEDS LOVE SHOULD KNOW
Two women in Busia exchange husbands to gain happiness